Khamriga laga soo qaado Spain
Booqashooyinka waajibaadka ee Spain
Waxaan nahay Spain
Spain by 5 dareemayaasha
Bisha: Janaayo 2019
Aceites Camino de Aníbal, Tayada Hilibka ee Albacete
Posted on 29 January, 2019 16 February, 2019 By HBcomment
Hannibal wuxuu ahaa Carthaginian General, oo loo yaqaanay inuu yahay mid ka mid ah istaraatiijiyeyaasha ugu fiican taariikhda, gaar ahaan marinkiisii ​​uu marayay Pyrenees isaga oo maroodiya. Aceites Camino de Aníbal waxay magaceeda u qaadataa sababtoo ah dhulalka ay ku koraan geedo saytuun ah oo ku yaal xayawaanku waxay ku yaalaan waddada uu caanka ku yahay Afrika Continue reading
Ham oo Teruel El Fari, tayada iyo dhaqanka
Posted on 15 January, 2019 16 February, 2019 By HBcomment
Degmada Cedrillas turolense ku saabsan 35 kiiloomitir u jirta magaalada ay wadagaan, dalalkan oo ka dheregtay by Mijares Webiga, wadagaan aan caadiga ahayn daawayn ham iyo hilibka doofaarka kale ee degaanka. Jamones el Ferial, oo ah magaca ugu sarreeya ee Sierra de Cedrillas SL, ayaa la calaamadeeyay kuwa soo saarayaasha kale ee degaanka Continue reading
Category: Wineries/Khamriga laga soo qaado Spain
Bodega Pradorey, kuwa la doortay ee Ribera del Duero
Posted on 14 January, 2019 16 February, 2019 By HBcomment
Taariikhda estate hadda degan Bodegas Pradorey taariikhda qarnigii lix iyo hore, marka domains ka qaaday in ka badan by Isabel Catholic ah, oo markii dambe u noqday dhulka beeraha iyo xoola-dhaqatada, joogi oo haysta boqortooyada, ilaa dib qarnigii labaatanaad wuxuu noqday hantida gaarka ah illaa iyo inta laga gaarayo Continue reading
Khamriga si ay u qaataan duufaan jasiirad cidla ah oo leh Richard Branson
Posted on 9 January, 2019 16 February, 2019 By HBcomment
Necker Island waa magaca jasiirad gaar ah oo ka mid ah bilyaneerka xoolo dhaqameedka Richard Branson, oo ku yaalla aagga Virgin Islands, halkaas oo Arbacadii hore Hurricane Irma ay soo afjartay wax kasta oo ku socda waddada. Waa in la ogaadaa in Irma, duufaan 5 ku taal 5, waa mid ka mid ah Continue reading
Posted on 7 January, 2019 16 February, 2019 By HBcomment
Degmooyinka Valdepeñas, Ciudad Real, waa Bodegas boqolaal sano jir ah Navarro López. Waxay u dhasheen ganacsi qoys, waa dhammaadka 80 markii ay soo iibsadeen madaxweynaha hadda, si weyn ugu riyaaqa siyaasadda ee winery iyo qaniinyada inta badan tayada iyo faragelinta. Horudhacayaasha Continue reading
Baro Spain! Dukaankaaga internetka ee alaabada Isbaanish ah. Gaadiidka dhammaan Yurubta
Gubashada ugu dambeysa
Fikradaha la siinayo khamriga Maalinta Aabaha
Vinos del Bierzo, oo ah caqiidada asalka ah ee asalka ah ee adduunka
Wararka ku saabsan blog
Dukaanka iyo Khudradda Dukaamada
Xuquuqda Dhammaan mawduucyada midigta laga dhigo: Galway Lite by Themeinwp
Xarunta doorbididda asturnaanta
Waa maxay Kukiyada?
Cookie waa fayl ama qalab lagu soo dejiyey qalab casri ah oo loogu talagalay ujeedada kaydinta xogta ee la cusbooneysiin karo oo laga soo celin karo hay'adda ka masuulka ah rakibidda. Taasi waa, faylka lagu soo dejiyey kombuyutarkaaga marka aad marinayso bogaga internetka. Kukiyada waxay u oggolaan kartaa bogga Webka, waxyaabo kale, si ay u kaydiyaan una soo qaataan macluumaadka ku saabsan caadooyinka adeegsashada ee isticmaalaha ama qalabkooda, iyadoo ku xiran macluumaadka ay ku jiraan iyo sida ay u isticmaalaan qalabka, waxaa loo isticmaali karaa aqoonsiga u isticmaalaha
Waa maxay nooca cookies ee uu isticmaalo boggaan?
Websaydkani waxay isticmaalaysaa cookies kuwaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay isticmaalaan oo ay ku safraan, iyada oo hubinaya helitaanka adeegyo gaar ah, iyo hagaajinta qaabeynta hawlgalka ee website-ka.
Gaar ahaan, boggani wuxuu isticmaalaa kakoobyadan soo socda:
Falanqaynta Kukiyada: Kukiyadaas waxaa loo isticmaalaa inay sameeyaan falanqeyn ku saabsan dabeecadaha iyo ficilada isticmaaleyaasha bogga internetka iyo sidoo kale samaynta qaababka safarka si loo sameeyo horumarin farsamo ee hawlgalka iyo adeegga.
Codsiga aan u isticmaalno si aan u maamulno kookooyinkaas waa hantida Google Analytics (www.google.com/analytics/)
Sidee loo maamulaa qaabeynta cookies?
Qeybtaan soo bandhig kooban oo ku saabsan sida loola tashado oo loo fuliyo habka nidaamka iyo cookies ee la xidhiidha bareegyada ugu caansan ama badiyaa loo isticmaalo.
Marka la eego macnaheedu, dhammaan daalacayaashu waxay u fasaxayaan inuu isticmaaluhu helo macluumaad guud oo ku saabsan cookieka lagu rakibay bogga internetka, gaar ahaan si loo xaqiijiyo jiritaanka isku mid, muddadoodii ama nidaamka deminta. Marka macnaha ah, ujeedada macluumaadka, xiriiro xiriir la leh ayaa la bixiyaa:
Dhinaca kale, isticmaaluhu wuxuu u oggolaan karaa, xayiri karaa ama baabi'iyay kariimyada lagu rakibay qalabka iyada oo la baddalayo qaabeynta barta uu adeegsanayo iyada oo la raacayo tilmaamaha lagu tilmaamay. Wixii macluumaad tilmaamay in inta badan goobaha cookie ah waxaa sida caadiga ah lagu fuliyaa ee menu "Preferences" ama "Tools" ee browser kasta, kiis kasta, mar walba waxaad tagi kartaa si aad browser xaliyo ama solventas shaki in ixtiraamka la abuuro.
Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in, haddii rakibidda dhammaan cookies-ka looga hortago, waxa ku jira bogga internetka iyo sidoo kale hawlaha iyo adeegyada ay bixiyaan waxaa laga yaabaa inay saameyn karto.